Yan Aung: ဘလော့ဂ်တွင် Powerpoint Slide များထည့်သွင်းခြင်း
PowerPoint Slide Show လေးတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ ထည့်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်.
ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး Slideaware Website ကိုသွားပါ။ Account တစ်ခုကို Create လုပ်ပါ. ပြီးသွားရင် Powerpoint Plug-In ကို Download လုပ်ပေးပါ. နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ သူပေးတဲ့ Setup File ကို run ပြီး ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ install လုပ်ပေးပါ.
ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Powerpoint slideshow ကို SlideAware မှာ သွားပြီး Save လုပ်ပေးရပါမယ်. အဲဒါကလွယ်ပါတယ်. ခုနက ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Plug-In ကို Download လုပ်ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ Powerpoint Windows မှာ ဒီလိုပေါ်လာပါမယ်.
ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ Slides လေးတွေကို SlideAware မှာ သွားပြီး သိမ်းထားပါ. ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ထည့်ဖို့ ဒီ Code လေးတွေကို ထည့်ပေးရပါမယ်.
width="480" height="380" style="border:none"></iframe>
ဒါပါပဲ. ကျွန်တော် အစမ်းတင်ထားတဲ့ PowerPoint လေးတွေကိုလည်း အပျင်းပြေလေး ကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဗျာ…
ဒီနေရာက ပို့စ်လေးကို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်.